Sawirro: Raashiya oo awoodeeda milateri shalay tustay caalamka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 10 May 2015 8 March 2016
Mareeg.com: Shalay oo aheyd 9-ka May 2015, waxaa fagaaraha cas ee ku yaalla caasimadda Raashiya ee Moscow lagu qabtay dhoola-tus millateri kii ugu ballaarnaa, kaasoo lagu xusayey sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay markii Raashiya guul ka gaartay dagaalkii ay la gashay Naaziyiintii uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee Jarmalka, Hitler.
Munaasabadda waxaa joogay madax ka kala socotay dunida, sida madaxweynayaasha Shiinaha, Masar, Falastiin, iyo qaar ka mid ah Jamhuuriyadaha saaxiibka la ah Raashiya.
Waxaa Raashiya soo bandhigtay ciidan farabadan, qalaba cusub oo milateri oo ay ku jiraan taangiyo, iyo gentaalaha waaweyn iyo diyaarado dagaal.
Halkan ka daawo sawirrada la yaabka leh ee Raashiya awoodeeda ku tuseysay dunida.